दलहरुलाई सुधार्ने मौका
टिप्पणीबिहिवार, कार्तिक ३०, २०७४
स्थापित दलहरूलाई सुधार्न पनि निर्वाचनमा नयाँ र वैकल्पिक अनुहार चुनिनु आवश्यक छ ।
यतिवेला निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयनलाई पूर्णता दिंदै देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने मौका आएको छ । द्वन्द्वपछिको संक्रमणकालको अन्त्यसँगै राजनीतिलाई नयाँ दिशा दिने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, स्थापित दलहरूको चरित्र, नेताहरूको नियत र क्षमता हेर्दा भने फरक भविष्यको आशा गर्न सकिने ठाउँ देखिन्न ।
भ्रष्टाचार समाजमै स्थापित भएको छ, राजनीतिक शक्ति राज्य स्रोतको दोहनको प्रमुख अस्त्र बनेको छ । यस्तो अवस्थामा मतदातासामु के त ? कस्तो नेतृत्वले देशलाई समस्याबाट पार लगाउन सक्ला ? नयाँ दिशा कहाँबाट आउला ? यसतर्फ गम्भीर विवेचना गर्नु सचेत मतदाताका लागि अत्यावश्यक भएको छ ।
संघीयताअन्तर्गतको नयाँ प्रणालीका लागि हुने निर्वाचनसँगै संक्रमणकालको अन्त्य हुनेछ । तर, जनताको आशा अनुरूपको समृद्धिको लागि भने विधिको शासन सुदृढ गर्ने संस्था र नीतिगत स्थायित्व आवश्यक पर्छ । नेताको चरित्रले व्यवस्थामा धेरै फरक पार्न सक्दैन । बरु व्यवस्था र समाजको चरित्रले नेताको चरित्र निर्धारण गर्छ ।
त्यसैले अहिले स्थापित दलका आशा लाग्दा भनिएका नेताहरूबाट पनि आम जनता खासै उत्साहित देखिंदैनन् । स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा पार्टीभित्रबाट मात्रै नियुक्ति गरेको स्वीकार गरेका गगन थापा र एनसेल कर छली प्रकरणमा संसदीय विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले साधेको मौनताले उनीहरूको इमानमाथि संशय उत्पन्न गराएको छ ।
पञ्चायतकालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाकै लागि तीस वर्ष संघर्षमा बित्यो । केही नेताहरूको अदूरदर्शिता र सत्ता स्वार्थका कारण बहुदलीय प्रजातन्त्रकालको शुरूआती चरणमै अस्थिरताको जरो गड्यो । दरबारले पनि शक्ति केन्द्रबाट आफूलाई पूर्णतः निष्क्रिय राख्न सकेन । त्यहीबेला शुरू भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व लोकतन्त्रको यात्रामा अर्को अवरोध बन्यो ।
आवधिक निर्वाचन हुन सकेन । गाउँगाउँमा सत्ता समीकरण फेरिए । साम्प्रदायिकताले हिंसात्मक रूप लियो । राज्य कमजोर भयो, ‘जसको शक्ति उसैको भक्ति’ सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भयो । युद्धकालको अन्त्य भएर राजसंस्थाको अन्त्य भयो, तर संक्रमणकालमा राजनीतिक विकृतिको चरम अवस्था सिर्जना भयो ।
यस्तो अवस्थामा अहिले मतदातासामु विवेकशील साझा दलले केही आशा भने थपेको छ । पूर्व सचिव किशोर थापा र युवा अभियानकर्मी रन्जु दर्शनालाई काठमाडौंको मेयरमा छुट्टाछुट्टै उम्मेदवार बनाएका नयाँ दुई पार्टी मिलेर बनेको विवेकशील साझाले स्थानीय निर्वाचनमा उल्लेख्य मत पाएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशका केही सीटहरूमा उम्मेदवार उठाएको यो दलका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले काठमाडौं क्षेत्र नं. १ मा उम्मेदवारी दिएका छन् । पारम्परिक रूपमा गणेशमान सिंहका छोरा प्रकाशमान सिंहले कांग्रेसबाट जित्दै आएको यो क्षेत्रमा मिश्रको उपस्थितिले सिंहलाई विचलित बनाएको उनका बयानहरूबाट अड्कल काट्न सकिन्छ ।